श्रीमानलाई बिदेश पठाएर परपुरुषसँग राती ८ बजे बन्द कोठा भित्र श्रीमती रं’गेहात प’क्राउ, प्रहरी पुग्दा जे भयो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
August 4, 2021 AdminLeaveaComment on श्रीमानलाई बिदेश पठाएर परपुरुषसँग राती ८ बजे बन्द कोठा भित्र श्रीमती रं’गेहात प’क्राउ, प्रहरी पुग्दा जे भयो ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । रोजगारीको शिलसिलामा लाखौ युवाहरु यतिबेला परदेशमा रहेका छन । देशमा रोजगारीको अवसर नहुदा आफ्नो परिवारलाई छोडेर समुन्द्र पारी जानु पर्ने वाध्यता नेपाली युवाहरुको रहदै आएको छ । रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो परिवारलाई छोडेर परदेशमा जानुको पिडा त छदै छ । तर बैदेशिक रोजगारीले कत्तिको पारिवारिक सम्बन्ध नै डामाडोल पनि हुने गरेको छ ।
त्यस्तै पारिवारिक विचलनको एक घटना यतिबेला सामाजिक संजालमा सार्बजनिक भएको छ । नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका ७ का २५ वर्षीय सन्तोष सुनार ऋण तिर्न भनेर बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १९ महिना अगाडी दुबई जान्छन । उनले आफ्नो २१ वर्षीय श्रीमती मनिषा सुनार र छोरालाई घर मै छोडेर सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्दै विदेशिन्छन ।
तर विदेश गएको ३ महिना मै सन्तोषको श्रीमतीसंग खटपट पर्न थाल्छ । श्रीमतीले आफुसंग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आएपछि सन्तोषले गाउका अन्य आफन्तलाई श्रीमती बारे चियोचर्चा गर्न लगाउछन । त्यहाँबाट पाएको सुचनाले सन्तोष छागाबाट खस्छन । उनको श्रीमती त अर्कै परपुरुषसंग सम्बन्धमा पो पुगिसकेका रहेछन ।
यो त एक प्रतिनिधि घटना मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गएका महिला पुरुषहरु धेरैको सम्बन्ध बिग्रेको समाजमा देख्न सकिन्छ । यस्ता घटनाहरुबाट पाठ सिकेर पारिवारिक कलहलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सोचनीय हुन्छ । प्रहरीको रोहबरमा श्रीमती पिडित सन्तोष पुग्दा परपुरुषसंग बसिरहेको श्रीमती मनिषाको कोठामा यसरी रंगेहात पक्राउ परेकी थिइन । भिडियो यहाबाट हेर्न सकिन्छ:
विदेशी मुद्राको बिनिमयदरः कुन देशको विनिमयदर कति ! आज घट्यो की बढ्यो विदेशी बिनिमयदर….